မေမေတို့ မီးဖွားဖို့အတွက် ဖေဖေတို့လည်း ပြင်ဆင်ထားသင့်လား? - Chit MayMay
Home Parenting Pregnancy Health မေမေတို့ မီးဖွားဖို့အတွက် ဖေဖေတို့လည်း ပြင်ဆင်ထားသင့်လား?
မီးဖွားဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတွေသာ ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆက အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ ဖခင်တွေလည်း ကလေးမွေးဖွားမှုအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေသင့်ပါတယ်။ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေက ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီ၊ ယခုဆိုရင် တစ်ချို့ဆေးရုံတွေက ဖခင်တွေကို မွေးဖွားခန်းထဲမှာ ရှိနေခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ဒီတော့ ဖေဖေတို့လည်း ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်ဆိုတာကို မှတ်သားထားပြီး ဖခင်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ တစ်သက်တာ စွန့်စားမှုကို အပြည့်အဝခံစားလိုက်ပါ။
၁။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ
ဖခင်ဖြစ်လာတော့မယ့် အမျိုးသားအများစုဟာ ပြောင်းလဲလာနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘဝကဏ္ဍတွေကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမယ်ဆိုတာကို တွေးပြီးကြောက်လန့်တတ်ကြပါတယ်။ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို လျှော့ပစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖေဖေတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ကျော်လွှားပါ။ ဖေဖေတို့အနေနဲ့ ကလေးကို မလွယ်ထားရပေမယ့် မျှတတဲ့ အစားအသောက်စားဖို့နဲ့ ဆေးလိပ်၊ အရက်ကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သင်နဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ကျန်းမာသော နေထိုင်မှုပုံစံက ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ကလေးငယ်တစ်ဦးကို မွေးဖွားရာမှာ သိသိသာသာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
၂။ လက်တွဲဖော်နှင့် စကားပြောပါ
နှစ်ယောက်စလုံးက ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေ၊ စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဝေမျှဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှ ရင်သွေးလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ယုံကြည်မှုကို အားကောင်းစေလိမ့်မယ့် ကျန်းမာသော ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံသစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ မွေးဖွားမှု ပြင်ဆင်ခြင်းသင်တန်းတွေကို တက်ရောက်ပါ
မီးဖွားမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်လို့ သိထားခြင်းက ကိုယ့်ပါတနာ၊ ကိုယ်နဲ့ အနာဂတ်ကလေးငယ်ကြားက တွယ်တာမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီသင်တန်းတွေတတ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရဲ့ဇီဝကမ္မဗေဒ နှင့် ကလေးထိန်းနည်းကို သိရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုသင်တန်းတွေ မရှိရင်တောင် နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ အလေ့အကျင့်ကတော့ လက်တွဲဖော် ဆေးခန်းသွားပြတဲ့အခါ လိုက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးအား အာထရာဆောင်းမှတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး သူ့ရဲ့နှလုံးခုန်သံကို နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုတော့ လက်လွတ်မခံပါနဲ့နော်!
၄။ ဆေးရုံအိတ်ကို ကူညီပြင်ဆင်ပေးပါ
ဆေးရုံမှာ မီးဖွားမှာဆိုရင် မီးဖွားမယ့်ရက်နီးလာတာနှင့်အမျှ ဆေးရုံအိတ်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ ကူညီသင့်ပါတယ်။ မေမေတို့ မွေးဖွားရက် မတိုင်မီတည်းက လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်တာကို သိအောင်မေးထားပါ။ ဒါဆိုရင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပိုနားလည်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
မီးဖွားချိန်ရောက်ပြီ – ဖေဖေတို့ ဘာလုပ်သင့်လဲ?
မေမေတို့ မွေးခန်းထဲမှာ မကြောက်ဖို့၊ နွေးထွေးဖို့နဲ့ လိုအပ်တာတွေ ပြည့်စုံဖို့ ဖေဖေတို့က ကူညီဖေးမပေးရပါမယ်။ လက်တွဲဖော်ရဲ့ စကားကို နားထောင်ပေးပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင် ကူညီပေးရပါမယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေကို ခေါ်ခြင်း (သို့) စိတ်ခံစားချက်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေကို တုံ့ပြန်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မေမေတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဂရုတစိုက်နဲ့ စာနာပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မီးဖွားခန်းထဲ ဝင်ခွင့်ရလို့ မေမေတို့ရဲ့ ဘေးမှာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် လက်ကို ကိုင်ပေးတာနဲ့ အားပေးစကားပြောတာမျိုး ပြုလုပ်ပေးပါ။
ဖေဖေတို့အနေနဲ့ ကလေးနှင့် မိခင်အတွက် အဝတ်အစား၊ အိပ်ယာခင်း၊ စောင်တွေ စသဖြင့် လိုအပ်သမျှကို ဘယ်နေရာမှာ ရှာရမယ်ဆိုတာကို သိရှိထားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးငယ် မွေးဖွားလာတဲ့အခါ မေမေတို့က ရုတ်တရက် ဘာမှ မလုပ်နိုင်သေးတာကြောင့် အဲဒီအချိန်မှာ ဖေဖေတို့က ကလေးငယ်အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက် လေ့လာပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ ကိုးလနီးပါး အကူအညီပေးဖို့ ဖေဖေတို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါစေနော်။
Previous articleသင့်သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘများနှင့် ဆွေးနွေးရန် အရေးကြီးသောအချက် (၅) ချက်
Next articleကလေးဘဝ လူမှုဆက်ဆံရေး – အသွင်အပြင်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု